Genotropin Phuket - iibso dhabta Genotropin GoQuick Pen 12mg
qiimaha joogtada ah 0.00 ฿ 101,000.00 ฿ Sale
Iyadoo ku saleysan qiimeynta 18 Faallo ka qor
Waxyaabaha ay ku qoran yihiin:
- Cabbitaanka khamriga
- BD Ultra Qalabka Ciriiriga ah
- Weelasha qaboojinta ee qaboojinta (2-8 heerkulka heerkulka)
Tilmaamaha isticmaalka (faylka PDF)
Waxyaabo firfircoon: Somatropin
CCF: Hormoonka koritaanka dib u habeynta
saaraha: PFIZER MFG. BELGIUM NV (Belgium)
Hormarka koritaanka daawada. Waxay u dhigantaa in lagu soo bandhigo farsamooyinka dib u habaynta ee somatopin, oo la mid ah hoormoonka koritaanka bani'aadamka. Carruurta aan lahayn hormoon korriinka hormoonada ah, iyo somatropin Prader-Willi soodhoweyntu waxay kordhisaa oo kobcisaa koritaanka toosan ee qalfoofka. Sida dadka qaangaarka ah, iyo somatropin carruurtu waxay joogteeyaan qaabdhismeedka jidhka caadiga ah, kicinta murqaha muruqyada iyo kor u qaadista baruurta. Gaar ahaan xasaasiga ah ee unugyada somatropin ee unugyada maskaxda leh. Marka laga soo tago dhiirigelinta lipolysis, somatropin wuxuu hoos u dhigayaa gelitaanka triglycerides ee kaydka dufan. Ka sokow, daroogadu waxay saameeysaa baruurta, carbohydrate iyo dheef-shiidka biyaha. Somatropin waxa ay kicisaa xayawaanka LDL ee beerka, waxayna ku dhaqmaan lipid iyo lipoprotein profile ee serum. Guud ahaan, bukaanka somatropin ee lagusoo dhigo maqnaashaha koritaanka hormoonka waxay yareyneysaa diiradda LDL ee kolesteroolka iyo apolipoprotein B ee serum. Sidoo kale, waxaa jiri kara hoos u dhac ku yimaada kolestaroolka guud. Somatropin waxay kordhisaa heerarka insulin, Si kastaba ha noqotee, heerka gulukoosta ee soonka caadi ahaan isbeddel ma laha. Carruurta qaba hypopituitarism ayaa laga yaabaa in ay ku dhacdo hypoglycemia oo dhakhso ah, oo lagu daaweeyo bukaanka qaata daroogada. Somatropin waxay dib u soo celinaysaa miisaaniyada dheecaanka iyo dheecaanka unugyada, oo la yareeyey hormoonka koritaanka la'aanta; waxay kor u qaadaysaa kaydinta sodium, potassium iyo fosfooraska. Somatropin ayaa kicinaysa dheef-shiid kiimikaad. Bukaannada qaba hurgun hormoonka koritaanka iyo somatropin osteoporosis daba dheeraaday daaweynta waxay keenaysaa soo kabashada macdanta macdanta iyo lafaha lafaha. Daweynta Somatropin waxay kor u qaaddaa xajirka muruqyada iyo adkaysiga jirka. Somatropin ayaa sidoo kale kordhisa soo saarida wadnaha, laakiin farsamaynta saameyntani weli lama yaqaan. Doorka laga yaabo inuu ka ciyaaro hoos u dhac ku yimaada iska caabinta xididdada dillaaca. Bukaanka qaba hurgun hormoonka koritaanka waxay noqon kartaa hoos u dhaca kartida maskaxda iyo isbedelka xaaladda maskaxda. Somatropin waxay kordhisaa isdhexgalka, Waxay hagaajineysaa xasuusta wuxuuna saameysaa dheelitirnaanta neurotransmitters ee maskaxda.
Nadaafada iyo qaybinta
Sida dadka caafimaadka qaba, iyo bukaanka qaba hurgun hormoonka koritaanka ayaa ku dhawaad ​​qiyaasta 80% n / a galay Genotropin®. Marka qiyaasta laysku duro XMUMX IU / kg culeyska Cmax waa 0.1-13 ng / ml ka dib markii 35-3 maya. Vd waa 6-0.5 l / kg.
Biotransformiroetsa kelyaha iyo beerka. Celceliska T1 / 2 ka dib markii / galka Genotropin® ee bukaanka qaba hurgumada hormoonka koritaanka waxay ku saabsan tahay 0.4 maya. Marka s / la soo saaro daroogada T1 / 2 waxay gaartay 2-3 no. Isbeddelka la ogaaday, laga yaabee, oo la xidhiidha nuugista gaabinta ee daroogada ee n / a duritaanka. Ku saabsan 0.1% daawada maandooriye ee qaabka isbeddel la'aanta ee ka soo baxa xitaa.
Farmashooyinka caafimaadka ee xaaladaha caafimaad ee gaarka ah
Bioavailability of genotropin® marka la eego ragga iyo dumarka.
Dhibaatooyinka kale, ee keena hannaanka dareeraha: qof weyn (> 1% iyo <10%) - bararka xuubka, xuubka hoose ee qorraxda, arthritis, myalgia iyo santuuqa. Saameynahan badanaa waa mid fudud ama dhexdhexaad ah, wuxuu dhacaa bilaha ugu horeeya ee daaweynta oo hoos u dhac ku yimaada ama ka dib marka la yareeyo dose. Cilladahaan waxyeeladaas waxay aheyd Genotropin®, da'da bukaanka, iyo laga yaabee, in ay noqoto mid u dhiganta da'da, taas oo aysan ku filneyn hormoonka koritaanka. Carruurta, saameynadaani waa kuwo dhif ah (> 0.1% iyo <1%). CNS: marar dhif ah (> 0.01% iyo <0.1%) - fayruska 'intracranial hypertension', ayaa laga yaabaa inuu yeesho barar dhuunta indhaha. Qeyb ka mid ah habka endocrine: marar dhif ah (> 0.01% iyo <0.1%) - horumarinta nooca sonkorowga nooca 2. Waxa kale oo ay muujisay hoos u dhaca cortisol. Muhiimadda bukaan-socodka ee dhacdadani waxay u muuqataa mid xadidan. Qeyb ka mid ah nidaamka muruqyada: Diidmada iyo subluxing ee madaxa fawdarka, soprovozhdaющiesя prihramyvaniem, xanuun ku dhaca sinta iyo jilibka; ee bukaannada qaba cudurka Prader-Willi waxa laga yaabaa inay yeeshaan qallajin (jimicsi Genotropin® Waxay kor u qaadaysaa heerka koritaanka); marar dhif ah - myositis, oo laga yaabo inay sababto ficilka m-cresol ilaalinta, kaas oo qayb ka ah Genotropin®.
Falcelin xasaasiyadeed: finan maqaarka iyo cuncun.
Dareen-celinta maxaliga ah: meesha cirbadda lagu duro (> 1% iyo XHUMX%) - firiiricyo, cuncun, xanuun, kabuubyo, hyperemia, barar, lipoatrophy.
Waxyaabaha kale: xaalado yar (<0.01%) - Horumarinta kansarka carruurta ee leetemia, si kastaba ha ahaatee, dhacdooyinka leukemia ma aha mid ka duwan kuwa aan lahayn yaraanta hormoonka koritaanka.
- Calaamadaha korriimada burka, oo ay ku jiraan koritaanka aan xakamayn ee burooyinka cirridka kudhaca (daaweynta antitumor waa in la buuxiyaa ka hor inta aan la bilaabin daaweynta Genotropin®);
- Xaalad khatar ah, si deg deg ah loogu horumariyo bukaanada iyada oo ka dhalata qalliinka wadnaha-furan ama caloosha, jahwareer badan iyo cadaadis daran oo neef-qabatin;
- Cayilka daran (saamiga miisaanka / dhererka jirka wuxuu ka badan yahay 200%) ama xanuunada neefsashada ee bukaanada qaba cudurka Prader-Willi;
- Xiritaanka meelihii koritaanka epiphyseal ee lafaha dheer;
- Cilad-darradu waa qayb ka mid ah daroogada.
Ka digtoonow waa in loo qoro bukaanka qaba sonkorowga, dhiig-karka madax-dhiigfuranka, gipotireoze.
XADGUDUB IYO LABAAD
Khibrada bukaan socodka ee Genotropin® inta lagu jiro uurka waa mid xadidan. Sidaa darteed, inta lagu jiro uurka waa in ay si cad u qiyaasaan baahida loo qabo magacaabida daroogada iyo khatarta suurtagalka ah, oo la xidhiidha tan. Inta lagu jiro heerarka caadiga ah ee hormoonada hormoonada korriinka hormoonada ayaa si weyn hoos udhacay ka dib markii 20 todobaadkii, lagu beddelay ugu dambeyntii ayadoo loo marayo xaddiga 30, sidaas darteed baahida loo qabo in la sii wado daaweynta Genotropin® ee saddexda bilood ee uurka ee aan uur lahayn. Xayawaanka daraasaddaha tijaabada ah ma muujin wax saameyn ah oo ku saabsan ilmaha caloosha ku jira, taas oo ay tahay in aysan aheyn, in natiijooyinka la midka ah la helayo marka la adeegsanayo Genotropin® bini'aadamka. Macluumaad la isku halleyn karo oo ku saabsan maqaarka hormoonka koritaanka ee caanaha naaska waa maqnaanshaha, laakiin xaalad kasta, nuugista borotiinka joogtada ah ee mareenka mindhicirka ee ilmaha waa mid aan macquul ahayn.
Xaaladaha xad dhaafka ah ee loo yaqaan "Genotropin®". Astaamaha: Xilliga xad dhaafka ah ee suurtogalka ah ee hypoglycemia, ka dibna hyperglycemia. Xaddiga dheeraadka ah ee dheeraadka ah ayaa dhici karta in calaamadaha la yaqaan ee hormoonka kobcitaanka bini'aadamka (akromegalija, gigantism). Daaweynta: Ka saarida daawada, daaweynta simptomaticheskaya.
GCS ee codsiga wadajirka ah ayaa yareynaya saameynta kicinta ee Genotropin® ee geedi socodka kobcinta. Isticmaalida isla marxaladda Genotropin® oo leh thyroxin khafiif ah hyperthyroidism ayaa laga yaabaa inay horumariso.
XAALADAHA LAGA HELI KARO DAWLADAHA
Daawada ayaa lagu sii daayaa daawada laguu qoray.
SHARCIYADA IYO XAALADAHA DIIWAANKA
Daawada waa in lagu keydiyaa meel aan gaarin carruurta, meel mugdi ah heerkulka 2 ° ilaa 8 ° C. Nolosha khadka - Sannadka XNUM. Xalka dhameystiran waxaa lagu kaydin karaa qaboojiyaha (heerkul ka socota 3 ° ilaa 2 ° C) inta lagu jiro 8 usbuucyada. Iska ilaali barafka ama kartida, wax xal ah diyaar maahan.